Aragtida socodka duulimaadka qaaradda: astaamaha, asalka iyo daahfurnaanta | Saadaasha Shabakadda
Waqtiyadii hore, qaaradaha waxaa loo haystay in ay taagnaayeen malaayiin sano. Waxba lama ogeyn in qolofka Dhulka uu ka kooban yahay taargooyin dhaqaaqa oo u mahadcelinaya qulqulka qulqulka marada. Si kastaba ha noqotee, saynisyahan Alfred Wegener ayaa soo jeediyay aragtida qulqulka qaaradda. Aragtidani waxay sheegtey in qaaraduhu ay qallaleen malaayiin sano welina ay sameeyeen.
Waxa laga fili karo, aragtidan ayaa ahayd kacaan adduunyada sayniska iyo cilmiga dhulka. Ma rabtaa inaad barato wax kasta oo ku saabsan wareejinta qaaradda oo aad ogaato sirteeda?
1 Aragtida qulqulka qaaradda
2 Caddayn iyo caddayn
2.1 Tijaabooyinka Paleomagnetic
2.2 Tijaabooyinka noolaha
2.3 Tijaabooyinka cilmiga dhulka
2.4 Tijaabooyinka Paleoclimatic
3 Heerarka qulqulka qaaradda
4 Qaybinta hadda ee noolaha
Aragtidan ayaa tilmaamaysa dhaqdhaqaaqa hadda ee taarikada kuwaas oo joogteeya qaaradaha isla markaana dhaqaajiya malaayiin sano. Taariikhda dhul ahaaneed ee Dunida oo dhan, qaaraduhu markasta isku meel ma wada ahayn. Waxaa jira cadeymo taxane ah oo aan gadaal ka arki doonno oo ka caawiyay Wegener inuu beeniyo aragtidiisa.
Dhaqdhaqaaqa waxaa sabab u ah sameynta joogtada ah ee walxaha cusub ee marada. Qalabkan waxaa lagu abuuray qolofta badweynta. Sidan oo kale, maaddada cusubi waxay ku shaqeysaa xoog tii hore oo waxay keentaa in qaaradaha ay isbedelaan.
Hadaad sifiican ufiiriso qaabka qaaradaha oo dhan, waxaad moodaa in America iyo Afrika midoobeen. Tani waxay ahayd dareenka filasoofiga Francis Bacon sanadkii 1620. Si kastaba ha noqotee, ma uusan soo jeedin aragti kasta oo ah in qaaraddani ay wada joogeen waagii hore.
Tan waxaa sheegay Antonio Snider, oo Mareykan ah oo ku noolaa magaalada Paris. 1858 wuxuu sare u qaaday suurtagalnimada in qaaradaha ay dhaqaaqi karaan.
Horay ayey u ahayd 1915 markii khabiirka saadaasha hawada ee Jarmalka Alfred Wegener uu daabacay buugiisa loo yaqaan "Asalka qaaradaha iyo badaha". Dhexdeeda ayuu ku soo bandhigay guud ahaan aragtida ah leexashada qaaradda. Sidaa darteed, Wegener waxaa loo tixgeliyaa qoraaga aragtida.
Buugga wuxuu ku sharraxay sida dhulkeennu u martigeliyey nooc ka mid ah kuwa ugu sarreeya. Taasi waa, dhammaan qaaradaha maanta aan haysanno waxay ahaayeen hal mar iyagoo wada sameysmaya hal. Wuxuu ugu yeeray qaaradda weyn Pangea. Awoodda gudaha ee Dunida awgeed, Pangea way jabi lahayd oo googoos bay u kala dhaqaaqday. Kadib malaayiin sano kadib, qaaradaha waxay qabsan lahaayeen booska ay maanta hayaan.
Caddayn iyo caddayn
Sida ku cad aragtidan, mustaqbalka, malaayiin sano kadib, qaaradaha ayaa mar kale kulmi doona. Maxaa muhiim ka dhigay in aragtidan lagu muujiyo caddeyn iyo caddeyn.
Caddaynta ugu horreysa ee ka dhigtay iyaga inay isaga rumaystaan ​​waxay ahayd sharraxaadda 'paleo magnetism'. Dhulka magnetka dhulka marwalba isku jiheyn ma ahayn. Had iyo jeer, aagga magnetka ayaa dib u rogay. Waxa hadda loo yaqaan 'pole magnetic south pole' horey wuxuu u ahaa woqooyi, taa bedelkeedana. Tan waa la ogyahay sababta oo ah dhagaxyo badan oo bir sare leh ayaa hela jaheyn dhanka tiirarka magnetka ee hadda jira. Dhagxaanta birlabta ayaa la helay kuwaas oo cirifka woqooyi u tilmaamayo cirifka koonfureed. Marka, waqtiyadii hore, waa inay ahaatay mida kale.
Paleomagnetism-kan lama cabiri karin illaa iyo 1950. In kasta oo ay suurtagal ahayd in la cabbiro, natiijooyin aad u daciif ah ayaa la qaatay. Weli, falanqaynta cabirradan ayaa lagu guuleystay in la go'aamiyo halka ay qaaradaha joogeen. Tan waxaad ku garan kartaa adigoo fiirinaya jihada iyo da'da dhagaxyada. Sidan oo kale, waxaa la tusi karaa in qaaradaha oo dhan ay mar wada midoobeen.
Mid kale oo ka mid ah baadhitaannada ku wareersan in ka badan hal ayaa ahaa kuwa nafleyda ah. Noocyada xayawaanka iyo dhirta labadaba waxaa laga helaa qaaradaha kala duwan. Waa wax aan la qiyaasi karin in noocyada aan tahriibku ka guuri karin qaarad kale. Taas oo soo jeedinaysa in hal mar ay isku qaarad ahaayeen. Noocyadu way kala firidhsanaayeen kolba marka ka dambaysa, markii qaaradaha ay dhaqaaqeen.
Sidoo kale, galbeedka Afrika iyo bariga Koonfurta Ameerika qaabab dhagax ah oo isku nooc iyo da 'ah ayaa la helaa.
Hal daahitaan oo soo dedejiyey tijaabooyinkan ayaa ahaa helitaanka lafaha haraaga isla fernka dhirtu ka dhacday Koonfurta Ameerika, Koonfur Afrika, Antarctica, India iyo Australia. Sidee nooc isku mid ah fern uga imaan karaa dhowr meelood oo kala duwan? Waxaa la soo gabagabeeyay in ay ku wada noolaayeen Pangea. Waxa kale oo laga helay haraaga xashiishka Lystrosaurus Koonfur Afrika, Hindiya iyo Antarctica, iyo lafaha Mesosaurus ee Brazil iyo Koonfur Afrika.
Dhirta iyo xayawaanka labaduba waxay ka tirsanaan jireen isla meelaha caamka ah ee kolba marka ka dambaysa sii kala baxayay. Markii masaafada u dhexeysa qaaradaha ay aad u weyneyd, nooc kasta wuxuu la jaanqaaday xaaladaha cusub.
Tijaabooyinka cilmiga dhulka
Horaa loo sheegay geesaha khaanadaha qaaradaha ee Afrika iyo Ameerika ayaa si fiican isugu habboon. Waxayna ahaayeen hal mar. Intaas waxaa sii dheer, iyagu ma ahan oo keliya inay wadaagaan qaabka xujada, laakiin sii socoshada safafka buuraha ee qaaradda Koonfurta Ameerika iyo Afrika. Maanta Badweynta Atlantika ayaa mas'uul ka ah kala goynta safafkan buuraha ah.
Cimiladu waxay kaloo caawisay fasiraadda aragtidan. Caddaynta isla qaabka nabaad guurka ayaa laga helay qaaradaha kala duwan. Waqtigan xaadirka ah, qaarad kasta waxay leedahay xukun u gaar ah oo roob, dabaylo, heer kul, iwm ah. Si kastaba ha noqotee, markii qaaradaha oo dhan ay mid dhisteen, waxaa jiray cimilo mideysan.
Intaas waxaa sii dheer, isla keydkii moore ayaa laga helay Koonfur Afrika, Koonfurta Ameerika, Hindiya iyo Australia.
Heerarka qulqulka qaaradda
Leexashada qaaradda ayaa ka dhacaysay taariikhda meeraha oo dhan. Marka loo eego mowqifka qaaradaha adduunka, nolosha waxaa loo qaabeeyey qaab ama qaab kale. Tani waxay ka dhigan tahay in qulqulka qaaradu uu leeyahay marxalado badan oo calaamadeysan oo astaan ​​u ah bilowgii samaysanka qaaradaha iyo, iyada, oo ah habab cusub oo nolosha ah. Waxaan xasuusnaano in nooluhu u baahan yahay inuu la qabsado deegaanka, iyadoo kuxiran xaaladooda cimilada, horumarka waxaa lagu gartaa astaamo kala duwan.
Waxaan falanqeyn doonnaa kuwaas oo ah heerarka ugu muhiimsan ee qulqulka qaaradda:
Qiyaastii 1100 bilyan sano ka hor: sameysmada dhul-weyne koowaad ayaa ka dhacay meeraha la yiraahdo Rodinia. Ka soo horjeedda aaminaadda caanka ah, Pangea ma ahayn kii ugu horreeyay. Sidaas oo ay tahay, suurtagalnimada in qaarado kale oo hore ay jireen lama diidana, in kasta oo aan caddayn ku filan loo hayn.
Qiyaastii 600 bilyan sano ka hor: Rodinia waxay qaadatay qiyaastii 150 milyan oo sano jajab iyo mid labaad oo weyn oo loo yaqaan 'Pannotia' ayaa qaabeeyey. Waxay qaadatay muddo gaaban, oo ah 60 milyan oo sano oo keliya.
Qiyaastii 540 milyan oo sano ka hor, Pannotia waxay u kala jabtay Gondwana iyo Proto-Laurasia.
Qiyaastii 500 bilyan sano ka hor: Proto-Laurasia waxaa loo qaybiyay 3 qaaradood oo cusub oo la kala yiraahdo Laurentia, Siberia iyo Baltic. Sidan oo kale, qaybtani waxay curisay 2 badood oo cusub oo loo yaqaan Iapetus iyo Khanty.
Qiyaastii 485 bilyan sano ka hor: Avalonia waxay ka go'day Gondwana (dhulka u dhigma Maraykanka, Nova Scotia, iyo England. Baltic, Laurentia, iyo Avalonia way isku dhaceen oo waxay samaysteen Euramérica.
Qiyaastii 300 bilyan sano ka hor: waxaa jiray kaliya 2 qaaradood oo waaweyn. Dhinac, waxaan leenahay Pangea. waxay jirtay qiyaastii 225 milyan oo sano ka hor. Pangea wuxuu ahaa jiritaanka hal wadamo oo weyn oo noolaha oo dhami ku faafaan. Haddaan eegno baaxadda waqtiga juqraafiyeed, waxaan arki doonnaa in dhul-weynahaani uu jiray xilligii Permian-ka. Dhinaca kale, waxaan haysannaa Siberia. Labada qaaradoodba waxaa ku hareeraysnaa Badweynta Panthalassa, oo ah tan keliya ee ku taal badweynta.
Laurasia iyo GondwanaBurburkii Pangea darteed, Laurasia iyo Gondwana ayaa la sameeyay. Antarctica sidoo kale waxay bilaabatay inay samaysmaan intii lagu jiray Triassic. Waxay dhacday 200 milyan oo sano ka hor waxaana la bilaabay kala duwanaanshaha noocyada noolaha.
Qaybinta hadda ee noolaha
In kasta oo markii qaaradaha la kala saaray nooc kasta uu helay laan cusub oo xagga horumarka ah, haddana waxa jira noocyo isku sifo u ah qaaradaha kala duwan. Falanqeyntani waxay u egtahay hidde ahaan noocyada ka soo jeeda qaaradaha kale. Farqiga u dhexeeya ayaa ah inay isbeddeleen waqti ka dib markay naftooda ku heleen goobo cusub. Tusaale tani waa jardiinada beerta taas oo laga helay labada Waqooyiga Ameerika iyo Eurasia.
Caddaymahan oo dhan, Wegener wuxuu isku dayay inuu difaaco aragtidiisa. Dhammaan doodahaasi waxay ahaayeen kuwo qancinaya bulshada sayniska. Xaqiiqdii wuxuu helay helitaan weyn oo u oggolaan lahaa horusocodka sayniska.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Saadaasha hawada » Ciencia » Aragtida ah qulqulka qaaradda
Waan jeclahay, aragtidu waxay umuuqataa mid aad ufiican waxaanan aaminsanahay in Ameerika iyo Afrika ay midoobi lahaayeen maxaa yeelay waxay umuuqataa xujo. 🙂